Umfana uvuka, ngokukhawuleza, kwiwashi ye-alamu yomsakazo. Ngokukhawuleza uhlola iselula yakhe nangayiphi na ifowuni ephosakeleyo ngaphambi kokuhlala phantsi kwikhompyutheni yakhe, ukukrazula i-akhawunti yakhe ye-imeyile, nokutshekisha kwi-spam kuyo nayiphi na imilayezo yezinto. Ekugqibeleni, emva kokuqhathanisa i-pop-tart ne-sparting ngokusebenzisa i-drive-thru iwindow e-Starbucks ye-double mocha latte, ufika emsebenzini, nje emva kwemizuzu emibini nje.
UHenry David Thoreau , indoda eyayidanduluka ngokuba "lula, kulula, kulula", inokuba yinkxalabo ngenxa yeenguqu ezenzeke kwihlabathi ukususela ngekhulu leshumi elinesithoba.
Kwi "apho ndahlala khona, kunye noko ke ndahlala khona" kwiqoqo lakhe leengcoko, uWalden; okanye, Ubomi kwi-Woods (1854) , uThoreau ucacisa ngeendlela ezininzi apho ihlabathi liguquka ngakumbi. UThoreau ufuna ukuhlala yedwa kunye nokuzihlukanisa ukuze aqokelele iingcamango zakhe kwaye acinge nge-mis (direction) yobomi baseMelika. Ukuphuculwa kwezobuchwepheshe, okanye "iindleko zokunethezeka kunye neengqalelo ezingenakuthobela" ezikhoyo kwiinkulungwane ezininzi kwiminyaka engamashumi amabini anesibini, nto leyo eyayiyidimaza kakhulu (136).
Enye into ebomini yaseMelika ebizwa ngokuba yiThoreau yayiza kuba yinto ebaluleke kakhulu, ingaba yinto yokuxhamla. Uninzi lwazo zizityebi zikhona ngohlobo lweentuthuko zezobuchwepheshe, kodwa uThareau, ngokungathandabuzekiyo, uya kufumana ezi ngcamango ezingekho kwimpumelelo.
Okokuqala, kufuneka sicinge nge-intanethi. Ngaba umntu owake wabhala wathi "unokuyenza lula ngaphandle kweposi, ekubeni [. . .] zimbalwa ezimbalwa zonxibelelwano ezibalulekileyo ngolu hlobo "cinga nge-imeyile (138)? Ngaba akayi kuba nexhala lokuba, kungekuphela nje ukuba sihlunga ngamacandelwana e-mail engenayo i-mail engenayo kwiibhokisi zithunyelwe ngeposi, kodwa sichitha ixesha ehleli kwideskiti ngokuchofoza ngeposi engenakho emzimbeni?
I-intanethi izisa "ihlabathi emnyango wethu." Kodwa, ukuba ihlabathi liza kuboniswa emnyango wendlu kaThoreau, akunzima ukuyicinga ukuba ivalwe. Yonke ingcaciso evela kwihlabathi lonke, i-intanethi esiyibambelele kakhulu, inokuthi ivele i-Thoreau. Ubhala, ngokukodwa:
Andizange ndifunde naliphi na iindaba ezikhunjulwayo kwiphephandaba. Ukuba sifunda ngomntu omnye ophangwayo. . . okanye esinye isitya sichithekile. . . asizange sifune ukufundwa komnye. Omnye ukwanele. . . Kufilosofi zonke iindaba, njengoko kubizwayo, kukuhleba, kwaye abo bahlelayo nokuyifunda ngabafazi balupheleyo phezu kweti yabo. (138)
Ngoko ke, ukusuka kumbono we-Thoreauvian, uninzi lwabantu baseMerika lugxothwa ebomini bamantombazana omdala, ukuxoxa malunga nayo yonke into engabonakaliyo engena engqondweni. Ngokuqinisekileyo akuyiyo iPalden Pond.
Okwesibini, ngaphandle kwe-intanethi, uThoreau uya kukhangela "ubuncwane" bezinye i-time-savers. Ngokomzekelo, khawuqwalasele iifowuni ezihlala zihlala ezandleni zethu nakwiipokethi. Eli lixesha apho abantu banomuva wokufuna ukuba bahlale behamba, besoloko bethetha, behlala bekulungele ukudibana. UThoreau, owahlala endlwini "ehlathini," omnye "ngaphandle kokubetha okanye ityhimpe," kwakungenakukufumanisa ukuba kwakunomdla wokuhlala uqhagamshelana nabanye abantu.
Enyanisweni, wenza okusemandleni akhe, ubuncinane kwiminyaka emibini, ukuba aphile kude nabanye abantu kunye nolonwabo.
Uyabhala: "Xa singaswelekanga kwaye sisilumko, siyaqonda ukuba izinto ezintle nezifanelekileyo zinakho naziphi na izinto ezihlala zihlala zihlala njalo" (140). Ngaloo ndlela, kuyo yonke le nto ehamba phambili kunye neengxoxo, wayeya kufumana singenasiphelo, ngaphandle kwesikhokelo okanye injongo .
UThoreau uya kuthatha ingxaki efanayo kunye nezinye iindawo ezintle, ezifana nokutya okukhawuleza okubonakala ngathi kubonakala kwinani elikhulayo kuzo zonke izitalato ezinkulu nezincinci. Ezi "phuculo," njengoko sizibiza, uThoreau uza kujonga njengento epheleleyo kwaye eyonakalisa. Siza ngeengcinga ezintsha ngaphambi kokuba sisebenzise kakuhle abantu abadala. Thatha, umzekelo, ukuveliswa kwe-cinema ephathekayo . Okokuqala, kwakukho ii-reel ze-film 16mm ne-8mm. Ihlabathi lavuya ngayo xa iifilimu zegreyimu zithunyelwa kwiitampu zeVHS.
Emva koko, amateyipu aphuculwe kwiDVD. Ngoku, njengokuba amaninzi amakhaya athola "umdlalo" wee-movie "eziqhelekileyo" kwaye azilungiselele ukubukela i-flick, iDisk disk iqhubekele kuthi kwaye, kwakhona, kulindeleke ukuba sihambisane. Ukuqhubela phambili. UThoreau wayengenakulungele ngakumbi kunokuba wathi, "sizimisele ukulambalala ngaphambi kokuba silambile" (137).
Ubumnandi bokugqibela okanye ubuncwane bobubomi baseMelika ukuba iTrereau ithathe ingxaki enkulu kunye nomzi okhulayo, okanye ukuhla kwelasezantsi. Wayekholelwa ukuba izihlandlo zenkxwabo ebomini ebomini beza ziphulaphule iintaka zasendle zelizwe. Ucaphula iDamodara: "akukho nwabileyo kwihlabathi kodwa izinto ezithandwayo ngokukhululekile" (132). Ngamanye amazwi, umntu unokuziqhayisa ukuba uhlala kwisixeko esikhulu apho angakwazi khona ukuya kwiimyuziyam, kwindawo yokuzonwabisa, kunye neendawo zokudlela ezilungileyo, ngaphambi kokuba eze ekhaya aze akhonkcele eludongeni ukuze ameme ummelwane emva kwekhofi. Sekunjalo, kwenzekani kwindawo? Yintoni eyenzeka kumhlaba nokuphefumula? Unokulindela njani ukuba uphefumulelwe kwiindawo ezinjengeenkqantosi, ezihlanganiswe nezikratshi ezivimba isibhakabhaka nokungcola okucoca ulanga?
UThoreau ukholelwa ukuba "umntu ucebile ngokulingana nenani lezinto azinako ukuziyeka" (126). Ukuba wayesaphila namhlanje, ukutshitshiswa kobuninzi bezinto ezintle kunye nezinto eziphathekayo, ezininzi zethu ezingenakukwazi ukuhlala ngaphandle, zingambulala. U-Thoreau usenokusibona sonke njengama-drones, ikopi yomnye nomnye, sihamba ngeendlela zethu zemihla ngemihla kuba asiyazi ukuba kukho enye inketho.
Mhlawumbi unokusinika inzuzo yokungathandabuzeki, kholelwa ukuba siyadliwa ngenxa yokwesaba okungaziwa, kunokungazi.
UHenry David Thoreau wathi, "izigidi zivukile ngokwaneleyo ukuze zisebenze ngokomzimba; kodwa enye kuphela kwisigidi ivuke ngokwaneleyo ukwenzela ukusebenza ngokubaluleka kwengqondo, kuphela enye kwizigidi ezilikhulu ukuya kubomi bombongo okanye obomi. Ukuphaphama kuphila "(134). Ngaba inkulungwane yeshumi elinesixhenxe ilele phantsi, ixhoba lezakhiwo zayo zokunethezeka?
UKhat Chopin 'I-Storm': Isishwankathelo esicwangcisiweyo kunye nohlalutyo
Iingcebiso ezili-9 zokwenza iDorm ihambe-Ngosuku olulula
Funda ukuba "Ukunyuswa kwemihla" kunokunceda njani "Hambisa indlu" ngesiFrentshi